Starbucks: fiakaran'ny vidim-piainana sy fanombanana ny marika | Martech Zone
Talata, Aogositra 5, 2008 Talata, Jona 23, 2015 Douglas Karr
Tena tsy azon'i Etazonia ny hoe kafe afaka tsiro toa. Ny fikosoham-kafe dia nasiana tsiro tamin'ny chip nandritra ny fotoana ela izay nanampy tamin'ny fampitomboana ny tombom-barotra azon'ireo orinasa kafe. Nisy namako iray izay niasa tamina toby famonosana iray izay niasa tamin'ny fitaovana nameno sy nametahana kaontenera kafe. Nilaza tamiko izy ireo fa nanova marika mandritra ny alina izy ireo, fa tsy nanova ny tsaramaso mihitsy. Izahay rehetra dia nahazo sakafo tamin'ilay sombin-javatra iray ihany, izay niova endrika tamin'ny kapoaka kafe isan-karazany.
Avy eo tonga kafe be
Tokony ho tamin'ny fotoana nanombohako nijery ny tsiron'ny kafe nataoko momba ny fotoana nahitako ilay Orinasa kafe sy dite Norfolk. Hatramin'izao dia holazaiko aminao fa tsy misy na inona na inona toy ny fahazoana tsaramaso vaovao natsatsika avy tamin'ny lafaoro.
Raha heverinao ho toy ny onja vaovao, toerana maoderina hihaonan'ireo mpitsikilo kafe sy hobnob ianao dia tsy ho lavitra ny fahamarinana. Ny tao anatiny dia toy ny ozinina voaararaotra… nisy rakotra kafe sy vovoka voanjo tamin'izay rehetra nojerenao. Niditra an-tsehatra fotsiny ianao, nandidy ny kitaponao, ary nivoaka. Tsy fantatro hoe avy aiza ireo tsaramaso, saingy nahatsiravina izy ireo. Ny tompony dia nampianatra ahy ny momba ireo mpanamboatra kafe vaovao izay tsy misy mpamono entana sy karajia voasesika. Tsy misy kafe may. Mmmm.
Avy eo tonga tao amin'ny Starbucks
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nifindra tany Denver aho ary navelako tany aoriana ny zavatra hitako vaovao. Tany Denver, nitady roasters roasters aho fa tsy nitovy izany. Tonga tao an-tanàna anefa i Starbucks, nefa nahazo tsiro ho an'ny tsaramaso nirehitra tamin'ny 'dolara aho. Heveriko fa tsy nahazatra ny vidiny na ny tsiron'ireo tsaramaso ireo na izany aza! Nandany ny vola 10 heny tamin'ny kafe mihoatra ny taloha aho!
Tena tiako ireo fivarotana. Tiako ny nipetraka, niditra an-tsokosoko tany amin'ny tsy misy tariby (talohan'ny nanefan'izy ireo vola), ary nahavita asa vitsivitsy. Nitendry mozika mahafinaritra teo ry zareo (talohan'ny nivarotany azy).
Tonga avy eo amin'ny seza mafy
Mamy tao amin'ny Starbucks rehefa nanokatra izy ireo voalohany. Seza milay erak'izao tontolo izao, mahatonga azy io ho toerana tsara hanaovana ny fivoriana tsy takiana. Ireo seza mirindra dia nanasa ny olona handany fotoana bebe kokoa amin'ny Starbucks. Novakiako fa maro ireo orinasa mpivarotra amidy no mametraka seza sarotra ka tsy hijanona ela ny olona. Nifindra tany amin'ny magazay lehibe kokoa sy seza mafy i Starbucks, ary nipetraka teo am-baravarankely tsara izy io.
Avy eo tonga ny Auto-Shots
Tadidiko ireo famantarana lehibe niarahaba anao tamin'ny vola:
I Barista no anao
Jane dia mety manana volom-bolo maintso sy fanindronana mpivady amin'ny toerana hafahafa, fa rehefa nisarika sary izy, dia nijery ianao rehefa nanao fanazaran-tena. Hiresaka momba ny zavatra tianao sy tsy tiany amin'ny safidy fisotroana izy ary hanao tolo-kevitra roa ho anao mifototra amin'ny zavatra niainany. Nahatsapa ho tsara ianao rehefa teo fotsiny ary nojerena tsara. Nahatsiaro ho niavaka ianao.
Saingy nitombo ny tsipika ary tsy maintsy nitombo ny tsipika fivoriambe. Masinina vaovao no nampidirina tao amin'io tany io, nofonosina ary narotsany ny tifitra. Nanjavona ny majia… tsy nisy tsy fahalavorariana, tsy nisy tifitra naharitra loatra, fohy loatra na be loatra ny antony. Mbola ratsy kokoa noho izany, very ny fahalalan'i baristas momba ny asa-tanana. Ny an'i Barista dia tsy latsa-danja noho ny mpanakanto hafa noho ny olona iray manipy burger ao amin'ny Burger King eo an-toerana.
Avy eo tonga tamin'ny fivarotana antsinjarany
Rehefa nijoro nilahatra ianao dia voahodidin'ny harona tsaramaso, kaopy, rongony, kaontenera voahosotra, sôkôla, mpanamboatra kafe, milina espresso, CD mozika, gazety… nanomboka toa ny magazay kokoa ny magazay toerana fahatelo, ilay toerana lavitra ny trano sy ny asa tiako ho lany fotoana.
Tonga avy eo ny Drive-throughs
Lava loatra ireo andalana mba hanaovana resaka. Ny barista dia sahirana loatra ka tsy nahafantatra anao. Tonga ny fiovan'ny barista vaovao, lasa foana ny “Your Barista”. Mba hiadiana amin'ny tsipika, napetraka ny drive-through. Mety kokoa. Haingana kokoa. Tombom-barotra lehibe kokoa. Mpanjifa bebe kokoa.
Tsy nisy safidy tamin'ny tsiro ny ankoatry ny mahazatra namboarina ho tianao. Ilay mahazatra ihany soso-kevitra nisotro ny andro na upsell ny mofomamy kafe.
Tsia fa misaotra. Tsy matavy, tsy karavasy, grande mocha azafady.
Valo dolara, mitondra fiara.
Mihaino radio aho rehefa misintona ary manome azy ireo ny volako sy ny lohako hiasa. Tsy misy arahaba, tsy misy resaka momba ny toetrandro. Izaho sy ny fiarako fotsiny. Lasa ny majia. Starbucks, ilay traikefa nahafantarako azy, dia maty.
Ny tena marina dia tsy fantatro fa tena tao amin'ny Starbucks tokoa aho teo am-pisotroana kafe. Oh - Nilaiko ny fanamboarako toy ny olon-drehetra, saingy tiako ilay marika, ny fomba, ny toetran'ny trano fisotroana kafe. Tiako ny nandeha tany satria nahatsiaro tena ho zava-dehibe aho. Ary rehefa nandoa $ 5 ho an'ny fisotroana zava-pisotro manokana aho dia nahatsapa ho tena zava-dehibe kokoa.
Etsy andaniny eny an-dalana, nanomboka nanaratsy ilay manokana i Starbucks mba hahazo tombony sy fahombiazana. Nitsahatra tsy nanao intsony izy ireo me mahatsiaro tena ho zava-dehibe. Nitsahatra tsy nanao intsony izy ireo me mahatsapa fa manokana. Tsy niavaka intsony izy ireo. Starbucks dia tantara mahatalanjona - nampiakatra ny vidin'ny zava-pisotro mahazatra izy ireo ary nahatonga anay rehetra nifamatotra. Saingy tsy afaka nitazona anay izy ireo. Ny fitomboana, ny tombom-barotra ary ny fahombiazany dia nandray an-tanana ary namoaka ny zava-drehetra tao amin'ireo magazay tsy manam-paharoa.
Ny mahatsikaiky dia ny nanambany tena ny Starbucks, tsy nisy olon-kafa nanao an'io. Tsy nisy mpifaninana niditra ary nanohitra azy ireo. Rahoviana Schultz niverina tamin'ny Janoary, nanana fanantenana lehibe aho. Ah raha izany dia.
Avy eo tonga ny fihenam-bidy
Androany dia nanomboka nanolotra a i Starbucks $ 2 fisotro atoandro raha mitondra tapakila manomboka maraina ianao. Nijanona nisakafo atoandro tao amin'ny Starbucks aho androany ary naka ny taratasiko manana tombo-kase taty aoriana. Tsy nanao izany mihitsy aho.
Heveriko fa karazana nahavoa ilay isika fantsika eo an-doha, hoy i Brad Stevens, filoha lefitry ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa. Mora ho an'ny baristas ny mampihatra ary mora ho an'ny mpanjifa ny mahatakatra.
Mora. Eny, izany no valiny. Te handoa mora aho.
RNH, Heveriko fa tafita tamin'ny lalao famaranana i Starbucks fantsika ao anaty vatam-paty. Tsy manam-pahalalana intsony izy ireo handoavana vola $ 5 ho anao hosotroina, izao dia manadino ny vokatra tokana lehibe indrindra noresahin'izy ireo. Andro mampalahelo ho an'i Starbucks.
Avy eo tonga tao amin'ny trano fisotroana kafe tsy miankina
Manoratra izany avy amin'ny trano fisotroana kafe ankafiziko eran'izao tontolo izao aho, izay fivarotana tsy miankina. Anio hariva, ny barista Cassie ahy dia nanangana soda italiana voaroy mahafinaritra ho ahy mifototra amin'ny adihevitra momba ireo tiako sy tsy tiako (fantany tsara). Ary i Alayna dia nanao ahy sandwich hen'omby namboarina mafana tamin'ny bagel voatsatsika (tsy eo amin'ny menio).
Nanoratra an'ity lahatsoratra ity tamin'ny finday maimaimpoana maimaimpoana aho ary nipetraka tamin'ny ampahany tamin'ny fotoana tao amin'ny seza swivel iray mahaliana. Cassy sy Alayna dia mifampiresaka, amin'ny anarany, miaraka amin'ireo mpanjifa ary mandraraka sary (ary mamerina azy ireo raha lava loatra na fohy loatra), manangona azy ireo tsara mifototra amin'ny hamandoana.
Misy tantara manan-danja toy izany eto ho an'ny orinasa hafa. Tsy afaka manohy mandoa vola fotsiny ianao amin'ny hoe "manokana" ary avy eo mamono ny zava-drehetra manokana. Tsy nanisy fihenam-bidy kafe antoandro ny Starbucks tamin'ity tolakandro ity, vao mainka aza nanambany ny marika.
Andro mampalahelo ho an'ny Starbucks, fa andro mahafinaritra ho an'ny fivarotana kafe tsy miankina. Tsy niverina mihitsy aho ary naka an'io fisotroana $ 2 io tolakandro io.
Tags: baristamarikafanalefahana marikafiakaran'ny vidin'ny marikakafeantsinjaranyStarbucks
Tonga ny «karatra» orinasa vaovao!
Aug 6, 2008 amin'ny 7: 28 AM
Fantatro ny tianao holazaina, nanandrana starbucks "espresso" aho, satria nieritreritra aho fa tsy hisy fomba mety hahatonga an'io rojo malaza be io ho ratsy. Ary izany tokoa. Fa mandeha any amin'ny toerana mahafinaritra any Sydney aho, any no andohan'izy ireo ny tsaramaso ao amin'ny cafe, ary fantatro ny anarany. Mahafinaritra.
12 Aogositra 2008 amin'ny 5:02 PM
Izaho dia Barista efa ho folo taona izao. Niasa tao amin'ny iray amin'ireo trano fisotroana kafe tsara indrindra efa niainako aho, ary hitako izay mahatonga ny fivarotana kafe ho tsara. Niasa tao amin'ny Starbucks nandritra ny roa volana teo aho tamin'ny fahavaratra iray, tsy nahalala na inona na inona momba izany. I nanana hiala amin'ity asa ity. Ny fahaizana rehetra azoko tamin'ny zavatra niainako tamin'ny naha Baritsa ahy dia nivoaka teo am-baravarankely rehefa nametraka io aprona io aho. Ny asako dia tsy misy ifandraisany amin'ny kafe (izay mahatsiravina ihany). Milaza aho fa ny 90% -n'ny asa, isan'andro, dia misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny fientanentanana sy ny hoe "mijery" be atao.
Tsy haiko hoe maninona no misy olona mankeny amin'ny Starbucks raha tsy hoe tsy mahafantatra tsara kokoa azy ireo. Misy toeram-pivarotana kafe tsy miankina manokana izay meloka amin'ny zavatra mitovy ihany koa. Izay itoerako dia tsy misy toerana tokana ahazoana kafe iray kapoaka mendrika.
Aug 6, 2008 amin'ny 9: 11 AM
Nahazo an'io tolotra io ihany aho tamin'ny alàlan'ny mailaka ary tsy maintsy nijanona aho raha nieritreritra tany amin'ny fiainako nandeha tany Starbucks indroa tao anatin'ny iray andro.
6 Aogositra 2008 amin'ny 12:24 PM
Manaiky tanteraka ny hevitrao momba ny varotra Starbucks aho. Mino aho fa ny ankamaroan'ny mpanjifa any dia mankafy ny "traikefa" an'ny Starbucks fa tsy ny kafe. Ironic izay nomen'izy ireo haingana ho an'ny besinimaro ka mila mandeha any amin'ny toeran-kafa ianao amin'izao traikefa izao.
Tsy mbola nanandrana ny The Bean Cup aho, fa vao tsy ela akory izay no nijanona tao amin'ny Monon Coffee Company. Manoro hevitra anao aho ny hanome azy ireo tifitra raha toa ka any amin'ny faritra Broad Ripple ianao.
Fiangonan'i Dim Sum
6 Aogositra 2008 amin'ny 12:44 PM
Vonona ny hivarotra ny anjarako ao amin'ny Starbucks aho. Heveriko fa tsy afaka ny ho sitrana izy ireo. Mety manana equity marika izy ireo, fa rehefa manomboka manidy fivarotana an'arivony vitsivitsy izy ireo dia hitanao fa nipoaka ny bubble.
Amin'izao fotoana izao aho dia manamboatra kafe any an-trano. Mora sy mahafinaritra izany.
6 Aogositra 2008 amin'ny 2:40 PM
Niasa tao amin'ny Starbucks aho taloha… Tsy miditra ao amin'izy ireo intsony aho izao. Aleoko ny Plant Plantation izay ahafahanao manafatra na inona na inona tianao ary fantatry ny barista ny zavatra lazainy, toa ny tokony ho izy! Izy ireo koa dia manana toerana tsy misy tariby maimaimpoana, be toerana ahazoana mijanona hametrahana ny tenanao, ary fivarotana gilasy mahafinaritra eo akaikiny. Toe-javatra mandresy-mandresy.
6 Aogositra 2008 amin'ny 3:33 PM
Izaho dia tompon'ny trano fisotroana kely mahaleo tena ao amin'ny tanàna kely (Dillard, GA). Azoko atao ny manome ny sain'ny mpanjifany ny sain'izy ireo, (na ny fiainana manokana) Tsy mampaninona ahy raha mijanona amin'ny WiFi tontolo andro amin'ny kafe iray kapoaka izy ireo, manamboatra ireo baiko manokana amin'ny fomba tadiavin'izy ireo azy ireo aho, ary miverina izy ireo hatrany hatrany! Gaga be, eh? Amin'ity orinasa ity, toy ny amin'ny ankamaroan'ny orinasa rehetra, ny serivisy dia TANANA !!!!
10 Aogositra 2008 amin'ny 4:50 PM
Voadonao eo amin'ny vatam-paty Starbuck eo amin'ny lohanao izany. Tsy misy toetra intsony izay nisy taloha. Tsy misy intsony ny srevice toa ny taloha. Raha tokony hanokatra magazay an'arivony tapitrisa izy ireo, dia mety ho nahazo vola nitombo fotsiny tamin'ny fampitomboana ny sasany tamin'izy ireo, niaraka tamin'ny mpiasa. Nieritreritra ny 'hifandray' amin'ilay kafe mpidoroka izy ireo, saingy nihazakazaka ara-bakiteny tamin'ny tany niaraka tamin'ny fanesorana izay rehetra nampiavaka azy ireo. Mila mpanjifa ve ianao? Any ivelany izy ireo !! Saingy tsy maintsy manolotra zavatra izay tsy ananan'ny olon-kafa ianao, ary farafaharatsiny mba manaova toa azy ireo ny mpanjifa tsara indrindra hatramin'izay! Hahomby ianao raha mbola mihira ny manta… ..tompo no zava-drehetra.
6 Aogositra 2008 amin'ny 6:46 PM
Lahatsoratra mahafinaritra. Tena "nokapohinao ny lohako" !! Tiako kokoa ny mankany amin'ireo trano fisotroana kafe tsy miankina kely kokoa. Malalaka kokoa izy ireo matetika ary manolotra sakafo atoandro sy sakafo hariva.
Misy fivarotana tena tsara any Munising, Michigan izay misy fivarotam-boky. Miditra ianao, mametraka ny kaomandinao ary afaka mizaha amin'ny alàlan'ireo fitoeram-bokin'izy ireo mandritra ny fiandrasanao.
6 Aogositra 2008 amin'ny 9:29 PM
Avy amina kolontsaina iray aho izay olana lehibe ny fisotroana kafe, mandeha any amin'ny toeram-pivarotana kafe an-jatony ianao, manafatra an'i Cappuccino, Espresso na Macchiato tsy misy fatra kely akory, miresaka kafe tsara kalitao aho, tsy misy zava-pisotro mendri-piderana antsoina hoe shmanzy izay mitaky Fandaharana Rosetta Stone hianarana ny lingo.
Eto Arizona, Starbucks dia ao amin'ny tsenambarotra fivarotana rehetra, fivarotana enta-madinika sy amin'ny zavatra rehetra misy fiantsonana. Hitako ny tenako mijanona isa-maraina hisotro kafe lava be miaraka amina reny baolina kitra mahazo sakafo maraina ho an'ny zanany sy ny zanany.
Ny Starbucks Coffee dia tsy manana tsiro tsy miova, raha ny tena izy dia tena ratsy tokoa raha tsy mahazo ny $ 5 Mocha Cappu ianao? miaraka amin'i Carmel zavatra.
mety ho paikadim-barotra amin'ny fanandramana hisotro kafe tsy misy dikany tsotra izay hahafahanao manatsara ny fisotroana $ 5, oh raha izany no aza adino ny sandwich bacon tsy misy tavy malalaka ... ny vaovao.
Douglas, misaotra tamin'ny antso fanairana
6 Aogositra 2008 amin'ny 9:33 PM
Ianao dia nampifandray ahy hatramin'ny alàlan'ny paositrao. Manoratra tsara. Miasa amin'ny famolavolana tranokala ho an'ny banky mega aho, ary mahita marobe mifanitsy amin'ny fihenan-danja ny marika. Hampitaiko amin'ny mpiara-miasa izany.
6 Aogositra 2008 amin'ny 11:26 PM
Misaotra betsaka, Eric!
Aug 7, 2008 amin'ny 3: 09 AM
Saika tsy nankany amin'ny Starbucks mihitsy aho satria mbola tsy nisotrosotro kafe ary nahoana no mandoa wifi nefa maimaim-poana any an-kafa?
Saingy tsoriko fa ny tsenan'ny vahoaka no olana. Ny mpamatsy vola dia mitaky fitomboana hatrany ary tsy miraharaha izay manokana kely ilainao amin'ireo orinasa manana ny tahiry ananany. Raha tsy mitombo ny taham-bolan'izy ireo mihoatra ny S&P dia manafoana ny fitantanana izy ireo ary mamoaka ireo mpisolovava.
Ny olana raha vantany vao tonga amin'ny ambaratonga iray ianao dia tsy afaka manohy mitombo amin'ny taha mitovy. Amin'ny tsenan'ny 95% aiza no ahitanao fitomboana 10%? Noho izany ny fitantanana dia manomboka manapaka zoro, manaratsy vola, mahazo cheesier miaraka amin'ireo fomba fiasa. Ary marina indrindra izany raha toa ny mpanorina sy / na ny ekipa mpitantana manana etos mandresy dia tsy eo an-tampon-tanana intsony (jereo fotsiny ny Apple mandritra ny andro John Sculley.)
Ka raha ny tena izy dia tsy ny Starbucks no namono tena, fa ny toetran'ny bibidim-panjakana izay nisarahan'ny mpampiasa vola tanteraka amin'ny fandraisana anjara amin'ny asan'ny orinasa ary mitaky bebe kokoa hatrany, bebe kokoa.
Ampy izay hahatonga ny kapitalista idealista te hijanona tsy miankina.
7 Aogositra 2008 amin'ny 3:15 PM
Mike nanaiky. Sarimihetsika mahafinaritra (izay misy singa tena havia afovoany fa mbola nankafiziko ihany) Ny orinasa. Hafatra iray manan-danja ao ambadiky ny sarimihetsika dia ny hoe miaina ny orinasa, miaina entona mivelona amin'ny tombom-barotra fotsiny. Tsy misy marina na tsy mety ao amin'ny orinasa iray, fa mahazo tombony na tsia. Mampatahotra izany satria saika tsy hahomby amin'ny mpanjifa!
Aug 7, 2008 amin'ny 8: 35 AM
Miombon-kevitra amin'i Eric aho, lahatsoratra bilaogy voasoratra tsara sy mahaliana ity izay misy teboka marim-pototra. Ny tiako ho fantatra momba ny antony nisondrotan'i Starbucks voalohany indrindra… dia olona maniry mafy hahatsapa ho miavaka fa tsy maintsy mandoa (be!) Izy ireo fa tsy ho an'ny kafe sasany, fa ny sain'ny olona manao kafe? Tena tianao sy tsy tianao ve ianao ka mila azy ireo hisolo tena ny kafe? Vao nandany herinandro tany amoron-dranomasina niaraka tamin'ny rafozako aho ary nanao ny kafe ratsy indrindra isa-maraina izy (Chock Full o'Nuts, maninona ianao no miantso kafe izany?) Ary ireo maraina mangina nifampiresaka taminy dia nahatonga an'io kafe io ny tsara indrindra nananako. Mandany ny fotoana sy ny vola amin'ny namana sy fianakaviana, dia hampahatsiaro anao ho manokana izy ireo.
7 Aogositra 2008 amin'ny 3:12 PM
Fanamarihana tsara ary ekeko izany. Misy boky iray izay niresahan'i Schultz ny trano fisotroana kafe lasa 'toerana fahatelo'. Toerana hihaonantsika amin'ireo namana ivelan'ny asa sy ivelan'ny tranontsika. Ny bara na pub teo an-toerana no nitrangan'izany, saingy nalain'i Starbucks izany.
Ny zavatra niainako dia miaraka amin'ny namana sy fianakaviana - fa matetika ao anaty tontolo mafana tsy lavitra ny trano no manome fahatsapana mahery. Ao an-tranontsika sy any am-piasana isan'andro isika… mila toerana hafa haleha. Nandritra ny fotoana maromaro dia Starbucks io toerana io.
7 Aogositra 2008 amin'ny 12:12 PM
Ary tsy takatrao akory fa sarotra ho an'ny barista kanto no mila manamboatra ilay switch lehibe (noho ny "toekarena") avy amin'ny tranokala any an-toerana ahafahany manana volo maitso, manindrona ary zavakanto tonga lafatra ho an'ny orinasa mandeha ho azy -tontolon'ny Starbucks… Mitroka.
7 Aogositra 2008 amin'ny 2:39 PM
Mieritreritra aho fa miova ny onja ary manantena ny hanana maestro toa ahy handraraka ahy tifitra andro vitsivitsy!
7 Aogositra 2008 amin'ny 1:03 PM
Hah. Mipetraka any Indianapolis ianao. Elaela aho no tsy tany amin'ny The Bean Cup.
Aug 8, 2008 amin'ny 11: 06 AM
mbola tsy nandeha tany amin'ny starbucks aho. manantena ny ho faty tsy mbola nisotro zava-pisotro kafe 5 1,000 kaloria $ avy amin'ny starbucks.
misotro kafe aho. mainty. yuban toa ampy tsara amin'ny fivarotana enta-madinika. ary ny vilany hatramin'ny maraina dia tsara isaky ny andro rehefa averina apetakao amin'ny microwave.
mieritreritra ny hahazo mpanamboatra kafe mpanao gazety frantsay aho. izany no ho andro rehefa snob kafe koa aho.
8 Aogositra 2008 amin'ny 2:47 PM
Miaraka amin'ny maha-imasom-bahoaka azy, dia ampahany amin'ny fifanarahana avo lenta / avo lenta. Ary izany dia famantarana ny halehiben'ny vondrom-piarahamonina tena zava-dehibe amin'ny olona. Ny mpanjifanay ao amin'ny Rubicon dia mila fifandraisana sy torohevitra ary koa faharanitan-tsaina ary fomba fiasa rehefa miasa miaraka aminay.
Ity ny fandraisako anjara amin'ny fiarahamonina - http://tinyurl.com/58skzn
8 Aogositra 2008 amin'ny 2:49 PM
Great Post. Nanjary iray amin'ireo bilaogiko tiako hamakiana ity!
Tsy mankany amin'ny Starbucks ihany aho rehefa manadino ny mametraka ny vilany fisotroako ny alina talohan'io. Mora amin'ny alàlan'ny asa ny tsipika mitondra fiara. Zavatra iray tokony horesahina momba ny wifi maimaim-poana dia ny tsy ny Starbucks rehetra no manana azy io intsony. Nandeha tamin'ny Wifi tamina iray teny an-dalana aho tamin'ny herinandro lasa teo ary diso fanantenana tanteraka. Mino aho fa ny Starbucks dia iray amin'ireo orinasa maro very lalana fotsiny raha nitombo haingana.
Ankehitriny dia mahazatra ihany izy ireo.
8 Aogositra 2008 amin'ny 4:28 PM
Mankasitraka ny fandokafana, Kyle!
Aug 10, 2008 amin'ny 1: 42 AM
Lahatsoratra mahafinaritra. Misy lesona lalina sy manetriketrika toy izany ao anatin'izany ho an'ireo orinasa rehetra te-hitombo haingana sy haingana kokoa .. ..mitombo sy manankarena kokoa. Tonite nahafinaritra resadresaka tao amin'ny Bean Cup. Tsy fantatro fa ireo fanontaniako amin'ny Internet dia hanodina ahy amin'ny tena info tsara. Misaotra.
Jereo eo amin'ny manodidina.
10 Aogositra 2008 amin'ny 11:48 PM
Marina tanteraka ny anao. Tsy mpankafy an'i Starbucks mihitsy aho tamin'ny voalohany. Tamin'ny fotoana nahatongavan'ny iray tany Terre Haute dia efa io rojo adala io. Ao aminao hatrany Terre Haute, tsindrio ny Coffee Grounds na Java Haute. Samy mbola tompony eo an-toerana izy ireo ary manao kafe tsy tonga lafatra. Na dia eo aza izany dia hitako ny fivarotana azy roa. Samy mitady hifaninana amin'ny Starbucks amin'ny lafiny sasany izy ireo ary tsy omeko tsiny izy ireo. Misy vola telo 'izao eto raha mifanohitra amin'ny fivarotana kafe efatra eo an-toerana. Pie kely kely hokaina.
11 Aogositra 2008 amin'ny 11:19 PM
Toy ny tarika tianao indrindra io. Tamin'ny voalohany dia tianao ny mahita azy ireo milalao satria milalao amin'ny toerana ahafahanao mandeha izy ireo ary mankafy ny tenanao miaraka amin'ny namana sy zava-pisotro ary mitendry mozika mahafinaritra ry zareo. Toy ny hoe manao fampisehoana ho anao fotsiny izy ireo. Avy eo dia nahazo dokambarotra bebe kokoa izy ireo ary faly ianao satria manana horonantsary mozika ary mivarotra rakikira vitsivitsy hafa. Avy eo moka noho izy ireo satria ny hiran'izy ireo dia nosoratan'ny mpamokatra be fitifirana ary milalao kianja goavambe izy ireo izay mahatsiravina ny feo ary ny fijanonan'ny fiara dia 5 kilaometatra miala ny toerana. Mandalo vetivety ny tsara rehetra… ankafizo raha mbola azonao atao!
Aug 12, 2008 amin'ny 7: 26 AM
Tonga dia eo ny lahatsoratrao. Tsy misy Experience Starbucks intsony, ary tsy tiako mihitsy ny niandohan'ireo tsaramaso may.
Ka angamba fivarotana kafe be herim-po eo an-toerana no hisokatra amin'ny iray amin'ireo toerana hialan'ny Starbucks, ary hasehony azy ireo ny fomba tokony hatao!
12 Aogositra 2008 amin'ny 1:41 PM
Izaho koa dia tiako ny "fivarotana kafe" (Starbucks, farafaharatsiny ho ahy, tsy mahafeno fepetra). Mipetraka amina toerana maromaro aho… samy manolotra kafe ara-barotra voamarina Certified, kafe namboly alokaloka. Misy zavatra saika momba anao manodidina anao miaraka amina orinasa lehibe, kafe be (izay mihoatra ny vidiny mirary ary tsy manimba ala mandohalika ARY manohana ny mpamboly), ary tsy misy tariby… raha mipetraka amin'ny seza efa antitra nefa milay ... LANITRA!
Aug 13, 2008 amin'ny 5: 26 AM
tany Etazonia aho dia tany amin'ny Starbucks ihany no nisotro kafe. Tiako ny rivotra iainana
Aug 13, 2008 amin'ny 11: 13 AM
Ie, tsy dia tiako loatra ny Starbucks, saingy nihatsara kokoa izany teo aloha - na dia toa ny tsaroanao aza ny fivarotana Massachusetts. Na izany na tsy izany, heveriko fa manampy amin'ny fitehirizana ireo magazay kely, malemy toy ny mahazatra azy ireo.
13 Aogositra 2008 amin'ny 11:54 PM
Avy amin'ny State Washington aho, tanin'ny fivarotana kafe 5 isaky ny zoro. Ny hetahetany farany amin'ny faritra kely kokoa dia ny fivarotana Woods Coffee. Izy ireo dia manana ny sezalofy mahafinaritra eo akaikin'ny toerana misy afo mirongatra sy ny fanangonana lalao goavambe. Misy tarika mivantana amin'ny faran'ny herinandro ary eny azonao atao ny manao ny asanao any.
Tsy eo an-tampony intsony ny Starbucks fa mety kokoa. Vetivety dia ampy tanteraka ny fahafinaretan'izy ireo. Tsy nitsidika Starbucks intsony aho nandritra ny volana maro. Tsy zakako ny fisotrony zava-pisotro misy fluff sy ny fanatrehana maharikoriko. Tsy misy olona mandeha mitady kafe tena izy… Mety hanao zavatra tsara kokoa izy ireo raha miaiky fa tena manao boaty vatomamy ao anaty kaopy feno froth.
Aug 14, 2008 amin'ny 1: 35 AM
Tadidiko ny fotoana nanombohan'ny starbucks teto. Betsaka ny fivarotana kely hijanonana hisotroana kafe sy sandwich, ary navelan'izy ireo tsy hanana asa intsony.
Starbucks dia momba ny marika sy ny fanararaotana. Anontanio ny mponina rehetra ao amin'ny New Hope, PA hoe inona no tsapan'izy ireo rehefa starbucks daholo nefa nanery ny fivarotana teo an-toerana mba hikarakara ireo mpizahatany sy mpitsidika.
starbucks dia nahomby tamin'ny fikarakarana ny olona mitady zavatra hafa, nitombo tamin'ny fahatsapana ho ambony sy miavaka, avy eo nanosika ny tendany tamin'ny famelana azy rehetra handeha ho any an-dohany. Izao dia lamaody fotsiny ary marika mpamorona hafa.
Jereo fotsiny ny isan'ny iPhone ho hitanao fa ampiasaina ao, ary ny isan'ireo kitapo mpamorona, ary macbooks. Tsy ela dia hitako ny ankamaroan'ny olona tonga tany mba hampiseho ny hatsarany. Ny ankamaroany tsy hahalala espresso na cappuccino mendrika raha toa ka misy barista tanora manan-talenta manana volo maintso ary manindrona azy eo amin'ny tarehiny noho ny fironana mahasosotra.
Aug 14, 2008 amin'ny 8: 52 AM
Tantara tsara izany - zavatra tokony hataon'ny mpandraharaha fivarotana rojo famakiana takiana ho an'ny mpiasan'izy ireo.
Tsy nahazo tsiro ho an'i Starbucks mihitsy aho, naleoko nanongana $ 1.50 ho an'ny kaopy kafe masaka maivana an'ny Panera Bread. Ary koa, Panera tsy mandoa vola velively amin'ny fidirana amin'ny Internet, manao ny fivarotan'izy ireo ho toerana mety hiarahana.
Lavorary ve i Panera? Tsia. Tahaka ny Starbucks ihany koa dia mandalo fiovana matetika momba ny mpiasa sy ny fitantanana miaraka amin'ny ambaratonga avo lenta izy ireo isan'andro.
Ataoko fa izany no antony tiako kokoa ny manamboatra sy misotro ny kafe any an-trano.
Aug 15, 2008 amin'ny 10: 38 AM
Doug, famintinana tena tsara izay ifanarahanay amin'ny mpanjifa sy ny mpivarotra.
Ny roa amin'ireo zanako dia efa an'ny barista (tsy tao amin'ny Starbucks) ary ity dia lohahevitra mafana iray izay tsy azon'ny tao anaty orinasa. Starbucks (sy ny fivarotana kafe rehetra) dia tokony hifantoka amin'ny traikefa feno. Raha tsy izany, maninona no mandoa ny vidiny lafo?
15 Aogositra 2008 amin'ny 4:33 PM
AHO: STARBUCKS BARISTA teo aloha
Lahatsoratra tsara Doug! … Toy izany koa any Seattle. Misaotra Andriamanitra fa misy foana ny fivarotana kafe «tena» manodidina. Mazava ho azy fa lehibe i Starbucks ary be atao foana, saingy ny serivisin'izy ireo sy ny kalitaony dia mitotongana hatrany.
15 Aogositra 2008 amin'ny 10:37 PM
Famakafakana tsara ny nanesorana ny marika, ary mino aho fa very. Nijery an'ity aho nandritra ny roa taona lasa. Ny zavatra niainana taloha izay nahatonga ny Starbucks tsy hitovy dia very satria ny rojo dia nanjary tsy dia nifantoka tamin'ny fomba nitondran'ny mpanjifa. Nanjary tsy miankina amin'ny tena izy, ny fanehoana farany dia drive-through. Afaka mamakivaky MacDonalds ianao ary mahazo kafe. Tsy ny Starbucks intsony no “toerana fahatelo”.
Misaotra tamin'ny famakafakana lalina.
16 Aogositra 2008 amin'ny 2:38 PM
Barista aho ao amin'ny Starbucks. Niasa tao nandritra ny 2 taona aho ary nanisa… ny andro farany hataoko dia ny sabotsy ho avy izao. Tsy hoe handeha ho any am-pianarana fotsiny aho fa marary amin'ny Starbucks. Afaka nifindra tamina magazay iray tany amin'ny faritra izay andehanako mianatra aho, saingy tsy te-hanao izany mihitsy aho.
Tiako ny asako taloha. Tiako ny fivarotana ahy taloha. Tiako i Starbucks taloha. Nanomboka tao amin'ny fivarotana lobby mahafinaritra tany Gresham, OR aho. Somary sahirana iny, saingy mbola nanam-potoana hahafantarana sy hankafizako ny mpanjifako aho, ary mbola nanam-potoana hahafantarana sy hankafizako ireo mpiara-miasa amiko. Tsy lazaina intsony ny mpitantana ahy dia iray amin'ny karazany. Avy eo dia voatery nanao ilay switch ho any amin'ny fivarotana iray any Vancouver, WA aho. Any Vancouver, miasa amin'ny fivarotana malaza ratsy izay "tena be atao foana aho" (azoko avy amin'ny olona tsirairay ilazako izay fivarotana hiasako izany). Tena sahirana tokoa dia fanararaotana ary izahay no tandindon'ny Starbucks izay resahinao ao amin'ny lahatsoratranao, ary nanana ny ampy aho. Misy fivarotana kafe any an-toerana tsara, ary tiako ny mandeha any amin'izy ireo fa tsy mankany amin'ny orinasako manokana! Andro mampalahelo ho an'ny Starbucks izany raha tsy ny mpiasanao manokana no manome anao ny ora isan'andro.
Ho fiarovana ahy sy ny an'ny barista Starbucks hafa, miasa tsara izahay miaraka amin'izay omena anay. Tsy ny fakana ny tandrokako ihany, fa rehefa afaka roa taona, dia barista tsara aho. Mikarakara ireo zava-pisotro ataoko sy ireo mpanjifa omeko azy aho. Manokana fotoana hiresahana amin'ireo mpanjifako aho ary hahafantarako azy ireo rehefa eo am-baravarankely-eo am-baravarankely na eo amin'ny kaontera aho rehefa eo am-pisotroana aho. Fantatro fa maro ny barista no naka ny toe-tsaina “burger-flipping” ary nanokana ny fitiavany ilay asa, saingy maro no tsy ary izy ireo no mitazona izay sisa tavela amin'ny Starbucks.
Izaho manokana dia very ny finoako sy ny fitiavako an'i Starbucks fa tsy hoe ny fivarotako dia magazay may, fa noho ny fomba itondrana anay mpiasa. Angamba fivarotako ihany io fa tena ratsy eo ary satria noho izy sy ny fivarotana toa azy dia lasa sambo milentika i Starbucks. Miasa ao amin'ny Red Robin koa aho ary voatsabo tsara any. Raha ny marina dia tiako ny asako any. Tiako ny miasa ary mahatonga ahy ho mpiasa tsara kokoa noho io.
Nandalo ny fiofanana sy ny fitsangatsanganana rehetra nataon'i Howard Schultz tamin'ny fiandohan'ity taona ity aho ary tamin'ny voalohany dia gung-ho aho, saingy very ny finoako ary niala tamin'ny asako tanteraka aho. Ny lahatsoratrao dia iray izay tokony ho hitan'i Schultz. Avy eo angamba izany no antso fanairana ilainy.
15 Mey 2009 tamin'ny 1:18 hariva
Fantatrao ny fomba ilazanao amin'ny tenanao fa mianatra ianao satria manana ny boky fanamarinana nosokafana eo alohanao? Fa tena manindry ny hoe Tafintohina ianao hahita lahatsoratra mahaliana hovakiana?
Eny ary, sendra ny anao aho ary tsy maintsy nanoratra hilaza aminao fa tiako be izany. Nomeko azy ireo ny ankihibe, mba hahafahan'ny olona maro kokoa hahita azy io ary hankafy azy io koa.
May 20, 2009 amin'ny 5: 36 AM
Fantatrao ny nanaitra ahy. Tena tsara ny tsipika Mc Cafe. Ny kafe an'i Mc Donald nandritry ny $ 3 kaopy dia toa kely ihany.
Rehefa avy nanandrana izany aho dia nalaina an-tsokosoko ary nandeha hatrany hatrany hatrany toy ny tara.